DEG-DEG: Barcelona Oo Ka Hadashay Wararka Sheegaya In Ousmane Dembele Uu Heshiis U Saxeexayo Manchester United - Gool24.Net
DEG-DEG: Barcelona Oo Ka Hadashay Wararka Sheegaya In Ousmane Dembele Uu Heshiis U Saxeexayo Manchester United
Barcelona ayaa ka hadashay wararka sheegaya in xiddigooda garabka weerarka ee Ousmane Dembele uu kusii jeedo Manchester United, kaas oo ay wararku sheegayaan in ay Red Devils kula wareegayso amaah si uu ugu noqdo beddelka Jadon Sancho oo ay ku guul-darraysteen inay lasoo saxeexdaan.
Agaasimaha farsamada Barcelona, Ramon Planes ayaa sheegay in aanay Barcelona wax wada-hadal ah oo la xidhiidha Ousmane Dembele la yeelanin Manchester United, ayna doonayaan inuu sii joogo Camp Nou xili ciyaareedkan.
Manchester United oo lasoo wareegtay intii uu suuqa furnaa Donny van de Beek oo kaliya ayaa waxay wali gaabis ka tahay inay samayso saxeexyo kale iyadoo ciyaartoyo dhawr ah oo lala xidhiidhiyeyna ay naadiyo kale kaga guuleysteen.
Warbaahinta Ingiriiska iyo Spain ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku warramayay in 24 jirkan reer France ay u furan tahay inuu ka baxo Camp Nou oo uu u wareego Manchester United, laakiin Planes ayaa meesha ka saaray jiritaanka wararkaas, waxaanu yidhi: “Hadal iyo dhamaantii, mka jiraan wada-xaajoodyo aanu la yeelanay Manchester United waqtigan, gebi ahaanba waan beeninayaa taas.
“Isagu (Dembele) waa ciyaartoy aanu ku xisaabtamayno, waxa aanu ognahay waxa uu gudo, waxaananu rajaynaynaa in sannadkan ay kooxdu ku arki doonto sidiisii ugu wanaagsanayd.”
Laacibkan ayay hadal-hayntiisa bixitaanku sii badataty markii uu tababare Ronald Koeman ciyaarsiin waayey kulankii ay xalay 3-0 ku garaaceen Celta Vigo oo uu kursiga kaydka ku dhamaystay, xilli ciyaartooyo da’yar ah oo aan khibraddiisa oo kale lahayn lasoo geliyey.
Warar kale oo maanta soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Barcelona iyo Ousmane Dembele ay heshiis buuxa iskula gaadheen in haddii Manchester United ay dalab rasmi ah soo gudbiso aan laga hor istaagin ee uu u wareegi karayo, balse aanay labadooda midna dani ugu jirin in amaah uu kaga baxo Camp Nou.